खरसाङमा रजनीकान्त - खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsखरसाङमा रजनीकान्त
June 6, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, दार्जीलिङ, मनोरञ्जन 0
दार्जीलिङ,6जून।
बलिवुडका प्रसिद्ध नायक रजनी कान्त आफ्नो चलचित्र थालाइबा-को सुटिङको लागि आज खरसाङ आइपुगे। उनी खरसाङका साथै दार्जीलिङमा लगभग 40 दिन बस्ने साथै उनको सुटिङ चल्ने जानकारी पाइएको छ। जसमध्ये भोलि7जूनदेखि 14 जुलाईसम्म खरसाङ वन विभाग अधीनस्थ रेञ्जर कलेज परिसर यसै चलचित्र सुटिङको लागि बुक भएको रेञ्जर कलेजका प्राचार्य डा. वाङ्डुप भोटियाले बताए।
जसले दार्जीलिङको माउण्ट हर्मन स्कूल परिसरमा पनि सुटिङ गर्ने भएको जानकारी पाइएको छ। यसैबीच, उनको चलचित्र सुटिङ टोली अघिबाटै खरसाङमा आइसकेको छ भने यस टोलीले सुटिङको लागि सम्पूर्ण तयारी शुरू गरिसकेको छ। प्राप्त भएको जानकारीअनुसार, खरसाङको रेञ्जर कलेज वा सेन्ट्रल एकाडेमी अफ् फरेष्ट एडुकेशन परिसरमा सुटिङको लागि सन टीभी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड चेन्नईले पर्यावरण, वन अनि मौसम परिवर्तन मन्त्रालयबाट अनुमति ग्रहण गरेको छ।
यसै कलेजका प्राचार्य भोटियाले भने-गत 30 मईदेखिनै यहाँ सुटिङको तयारी चलिरहेको छ। जसमा काठ मिस्त्री, रङ्ग लगाउने कर्मीहरूले लगातार काम गरिरहेका छन्। उनले आफूलाई यहाँ सुटिङ हुन लागेको चलचित्रमा कुन-कुन अभिनेता वा अभिनेत्रीहरूले अभिनय गर्नेछन् भन्ने थाह नपाएको बताए पनि सन टीभी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड चेन्नईद्वारा पठाइएको पत्रमा रजनी कान्तको नाम भने उल्लेख रहेको बताए।
विश्‍वस्त सूत्रबाट पाइएको जानकारीअनुसार, दार्जीलिङमा यसअघि यति ठूलो लागतको चलचित्र सुटिङ भएको थिएन। यद्यपि, यस चलचित्र निर्माणको लागि कति खर्च गरिन्दैछ भन्नेबारे कतैबाट ठोस जानकारी पाइएको छैन। ज्ञात रहोस्, दार्जीलिङमा विगत समयमा अमिताभ बच्चन. धर्मेन्द्र, ऋृषि कपुर, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, कमल हसनलगायत शाहरूख खान, रणवीर कपुर, आदित्य पंचोली, पूजा भट्ट आदिले अभिनय गरेका विभिन्न चलचित्रहरूको सुटिङ भइसकेको छ। जुन क्रम अझै पनि रोकिएको छैन।
यसै क्रममा फेरि रजनी कान्त जस्ता प्रसिद्ध अभिनेताको लगभग 40 दिनसम्म सुटिङ हुने भएको छ। भोटियाले खरसाङ वा वन विभागकै लागि यो चलचित्र सुटिङ गर्वको विषय हो भन्ने बताउँदै यो चलचित्र अवश्यै सफल हुने कामना पनि गरे। वर्ष 2016-मा यस रेञ्जर कलेजमा नियुक्त भएका भोटियाले भने-हामीले चलचित्र सुटिङ टोलीलाई भनिसकेका छौं, यस संस्थानमा श्रेणी चलिरहेको समय भने सुटिङको अनुमति दिइनेछैन।
उनले जनाएअनुसार, यस कलेजले हाल वन विभागका अधिकारीवर्गलाई तीन दिन, सात दिन अनि दुइ सप्ताहको प्रशिक्षण दिने गरेको छ। गत मार्च महीनामा मात्रै एउटा व्याचले आफ्नो प्रशिक्षण पूण गरेको थियो भने यसै जून महीनामा 25 देखि 30 जना अधिकारीवर्ग प्रशिक्षणको लागि यहाँ आउने भएका छन्।
विद्यार्थीवर्गलाई खाता,कलम तथा अध्ययन उपयोगी सामाग्रीहरू वितरण
‘दार्जीलिङलाई सुन्दर र सफा राख्ने दिशामा यहाँका नागरिकहरू सचेत छैनन्’